Indawo yenkanyezi ebalazweni lokuthutha likaVladimir Vladimirovich ayithembisi impilo yokuthula. Ngokuyinhloko, izici ezijulile zenyanga ezikhanyisayo ezinjengokuthi u-Uranus no-Saturn bangaphula ingaphakathi lomongameli. Uzodinga ukuhlabela enye yezinto ezimbili: amandla noma impilo. Noma kunjalo, kunezikhathi ezinhle. Imininingwane eyengeziwe mayelana nabo ikhuluma ngezinkanyezi ezigunyazayo nezizimele.
Ukubikezelwa kwePavel Globa
Ngokwezibalo zezinkanyezi ezingavamile, akukho lutho oluzovimbela u-Putin ukuba ahlale emandleni ngoMashi. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi kuyomlethela injabulo - kungomunye umbuzo. Njengoba iSaturn ephazamisekile isondela masinyane endlini yeScorpio. Futhi lokhu kungabonakaliswa yisifo esibulalayo, futhi ibhodi lizoba mfushane kunehlelwe. Uma umengameli engakwazi ukumelana nokuqothulwa kwamandla emhlabeni, khona-ke wonke amandla akhe ayokwazi ukugcina kuphela lokho okushiwo eminyakeni edlule. Akukho okusha okwakhiwe futhi ngeke kutholakale.
Umhloli wezinkanyezi ubikezela ushintsho lwekhadinali ku-vector ngo-2023. Uma indoda eneminyaka engu-55 iqala ukusebenza. Ukudlula kwakhe akucacile, kodwa okwamanje kuzoduma ukuhlonishwa okujwayelekile. Iqiniso liwukuthi uzolwa nesifo esingelapheki. Lokhu kuzomsiza ukuba enze okufanayo nomnotho waseRussia: ukuvuselela izwe ku hypostasis yomholi wezobuchwepheshe obuphezulu.
Isibikezelo seVlad Ross
Ngokombono wethu, ukubikezelwa kwesazi sezinkanyezi esivela e-Ukraine kwakunganaki. Ngokwezibalo zikaRoss, ngoFebruwari 2018, u-Putin uzoba nzima. Lokhu kungenxa yethonya elifanayo likaSaturn - umhlaba wezilingo ezinzima kubantu. Indima ebalulekile izophinde idlalwe ngokuhlangana kweNyanga no-Uranus. Lesi sikhundla seSatellite satellite ngokuvamile sibonisa izinkinga zempilo ezingalawulwa.
Ukucindezelwa kuPutin kuzohlinzekwa kuzo zonke izinhlangothi: izigwegwe zangaphandle ziyoqina kuphela, futhi nazo zinganeliseki ngamabhizinisi aseRussia. Ukuwohloka okukhulu kwamazwe omhlaba kunokwenzeka kakhulu: lapho abameleli bezindikimba ezibusayo zezwe benqabe ukwamukela amanye amazwe. Lokhu kungase kubandakanye ukubhalwa kwesinye isimiso sokukhishwa kwesigodlo. Isikhathi esinzima sizohlala kuze kube sekupheleni kwehlobo.
Kodwa ngisho nangemva kwehlobo, uVladimir Vladimirovich ngeke akwazi ukuphumula. Kusukela ukuphela kwelanga ka-Agasti kuzophawula ukuphela komjikelezo weSarossian. Uma nje u-Putin eqala amandla ngalesi simo semvelo. Yena kanye naye, ubungozi futhi ashiya. Leli khadi elingenakugwemeka emgodini wenkanyezi yakhe ezayo. Ngokufanayo kusho ikhalenda yeZoroastrian. Emlandweni weRussia kukhona ukuthambekela okucacile kwabaholi ukuhamba lapho ikamela lifika. Ngakho-ke, ngisho nokunqoba okhethweni likaMengameli ngeke lududuze uPutin. Ulindele ukuhlolwa okukhulu kwamandla. Ukusongela impilo ngeke kube izitha kuphela, kodwa nezifo zabo siqu.
Isimo sezombangazwe nezomnotho sizobe sibi kakhulu. Izwe lizoqothulwa ukuze libheke izimpikiswano zohlanga. Futhi ukwethembeka kwabathembekile abaqotho kuyoba yindaba eqanjiwe.
I-Horoscope evela ku-Alexander Alexandrov
I-numerologist eyaziwa kakhulu nayo yenze umzamo wokukhanyisa ukuthi uMnu. Putin uzoba yini. Ukubalwa kwakhe okulinganayo kubonise ukuthi uhulumeni kaMongameli awusongeli lutho. Isihlalo sakhe uyosindisa, futhi inqubomgomo izohlala efana. Isimo esinjalo emnothweni wezwe sivame ukubizwa ngokuthi ukusimama noma ukuzinza, kuye ngokuthi izifiso zakho kanye nezintandokazi ezithandekayo. Ukusekela abantu kuzovumela uPutin ukuba ahlale emandleni kuze kube sekupheleni kwegama lakhe elisha.
Umbono kaMaria Duval
I-French clairvoyant inombono ohlukile. Ukukhulumisana kwakhe nezinkanyezi kubonise ukushintshwa komholi kulo nyaka. Kodwa-ke, ukulukhuni kwalolu khetho ukuthi ukuhoxiswa kukaVladimir Vladimirovich kungenzeka kuphela ngentando yakhe ... Isibonelo, ukwenqaba ukubamba iqhaza kokhetho kungase kuhlotshaniswe nokuwohloka okubukhali empilweni yomongameli. Kukhona ingozi yokufaka ubuthi ngamakhomishana. Futhi, uMaria uyavuma ukuxoshwa kwezombusazwe: lapho ukukhishwa ngokuzithandela emandleni kuzokwenziwa ngokushintshanisa ukuxolelwa kweNkantolo yeHague. Ukhetho lwesibili lubonakala luhlakaniphe ngokwengeziwe, kodwa kudinga okungenakwenzeka kusuka ku-Putin. UVladimir Vladimirovich ubonakale enamandla kakhulu ukuba angene esitelekeni sezombusazwe. Ngakho-ke, kuze kube sekugcineni, uzobhekana nohlelo olungalungile lwezinkanyezi.
Ukubikezelwa kukaFatima Khaduyeva
Umbono ofanayo wabelana nomhlanganyeli we-Battle of Psychics. Isimo sakhe sengqondo sokuqiniseka asikho kangako ukuthi uVladimir Vladimirovich uzothatha amandla akhe, kodwa kunalokho ukuthi umbusi olandelayo uzokwazi ukuhola izwe ngaphandle kwenkinga. Futhi lokhu kungenxa yezinga elijulile elingokomfanekiso: kuze kube maduzane, iRussia yahlaselwa yi-karma yokubulawa komndeni wamakhosi. Ngemuva kokuba uPutin ehlenga izono zabantu bakhe, izwe lizokwazi ukuphefumula ngokuthula. Izimpi ezigazini ziyophela, futhi isikhathi segolide sizofika. Awudingi ukubuka njalo emuva kwesikhathi sesiliva sombuso. Isizukulwane esisha saseRussia siyodlula zonke izimpumelelo zayo. Ukuhlonishwa kweMariya kuzokuvumela umengameli omusha ukuba ahoxise izwe kusukela ekuhlanganyeleni emhlabeni wonke ngokushesha. Kodwa impilo kaPutin izokuwohloka ngokushesha. Kanye namandla omzimba wakhe uzothatha wonke amandla. Ezingeni lesithambo, amandla okuphila aqala ukwehlisa amandla. Umengameli uzoshabalala masinyane ezikrinini ze-TV.
Umbono kaLela Kakulia
Isibikezelo se-clairvoyant esivela eGeorgia asifani kakhulu nokubalwe kwe-stellar kwabalingani bakhe. Kodwa usabona uPutin isikhathi esithile emandleni. Intuition kaLela ithi ukushintsha kwamandla kuzokwenzeka kuphela ngenxa yokhetho lokuqala ngemuva kweminyaka embalwa. Futhi ngaphambi kwalokho uVladimir Vladimirovich uzoqhubeka nokugoba umugqa wakhe omdala. Inkani yakhe ingaba nomona kuphela: umhlaba wonke uphenduke umholi waseRussia, futhi unenkani ngokuma. Umcimbi othakazelisayo kakhulu uzokwenzeka empilweni yomuntu siqu kaPutin. Kungenzeka ukuthi ukuze alondoloze amandla akhe impilo ushada owesifazane osemncane. Ubunikazi bakhe ngesikhathi esizayo buzogcinwa ngasese. Kodwa-ke, ngisho namandla ayo ngeke avimbele umlandeli osemusha futhi onesizotha ekubambeni amandla eminyakeni embalwa. Ubuthakathaka kakhulu uVladimir Vladimirovich ngemuva komzabalazo wezentwasahlobo wehhovisi likaMengameli. Ngemuva kwalokho, kuzodingeka alwe ngokuncintisana nabaphikisi bezombangazwe njengabathengisi bemfihlo. Lokhu kubonakaliswa ngokucacile nguSaturn ebalazweni lokuhamba leqhawe ...
I-horoscope elungile yeviki lika-Okthoba 16-22, 2017
Ukufaneleka kwazo zonke izibonakaliso ze-zodiac: futhi yini okulungile kuwe?
I-Horoscope ngo-Okthoba 2017 - Owesifazane waseCapricorn - evela eTamara Globa no-Angela Pearl
I-Horoscope ye-Cancer Woman ngo-Agasti 2016
Izici zobunjwa beCapricorn yowesifazane
I-Horoscope yowesifazane waseCapricorn ngoJulayi 2017
I-Horoscope ye-Taurus-Abesifazane ngoJanuwari 2017
Izakhiwo zokwelashwa nezomlingo we-coral
Kanjani masinyane futhi kahle ukuba uhlanganyele nomthandi wakhe?
I-Apple iphaya kuhhavini ye-microwave
Indlebe evela ku-salmon
Izinhlobo zabesifazane ngokuphathelene nomhawu
Amathoyizi asebenzayo ngezinja
Lip libukeka ekhaya
Isaladi ngamagilebhisi kanye nenkukhu yesibindi
I-Moscow Film Festival: yikuphi, i-Russian "Oscar"?
Isaladi ngezinkuni ze-crab nge-orange
Utamatisi e-gelatin ebusika - zokupheka ngesithombe ngaphandle kokufaka inzalo kanye nayo. Zokupheka ezilula ezinyathelo eziyinkimbinkimbi utamatisi omnandi ku-gelatin no-anyanisi ne-parsley
Indlela yokwenza umuthi omile
Izipho zika-Mashi 8, ozakwabo
Ukubukeka okusha kwe-cosmetology
I-Horoscope yowesifazane-iGemini ngoJulayi 2017
Ukukhethwa kwamafutha kuncike ekumnandi kwamafutha abalulekile
Geza ushizi ekhaya kanye nezici zalo zokugcina